Tag: email chinyorwa | Martech Zone
Tag: email chinyorwa
11 Yakashata Email Maitiro Ekudzivirira Kunze kwekunge Iwe Uda Vanotsamwa Vanyoreri
Dhijitari Yechitatu Coast yakashanda naReachmail kuti vaone hunhu hwakanyanya uye miitiro yakaipa kwazvo inoratidzwa nevatengesi veemail. Iyo infographic iyo yavakagadzira inobatanidza hunhu hwese kune isingakanganwike pop tsika hunhu kubatsira vashambadzi kurangarira nekubatanidza hunhu husina kunaka. Ivo zvakare vaisanganisira inoitisa zano ekushandura hunhu husina kunaka kuita hwakanaka. Nehurombo, havazi vese vanotarisira eemail ekushambadzira maturusi anovashandisa nemazvo. Zviri zvachose zvinogoneka uri kuita mumwe kana kupfuura
Mailjet Inotangisa A / X Kuyedza ine anosvika gumi Mavhezheni
Chipiri, May 6, 2014 Chipiri, May 6, 2014 Douglas Karr
Kusiyana neyakajairwa A / B kuyedza, Mailjet's A / x kuyedza inoita kuti vashandisi vapfuure-kusvika kusvika gumi akasiyana mavhezheni eemaimeri ekuyedza anotumirwa zvichienderana nekusanganiswa kwemana anokosha akasiyana: Email Subject Line, Sender Zita, Pindura kuZita, uye iyo email zvirimo. Iyi ficha inobvumidza makambani kuyedza kushanda kweemail isati yatumirwa kuboka hombe revatambi, uye inopa njere vatengi vanogona kushandisa manyore kana otomatiki kusarudza iyo inoshanda kwazvo email